प्रशंसात्मक खोजसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / प्रशंसात्मक खोजसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन
प्रशंसात्मक खोजसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन
Posted by: युगबोध in विचार October 9, 2018	0 424 Views
प्रशंसात्मक खो जलाई अंगे ्रजीमा एप्रिसियटिभ इन्क्वायरी भनिन्छ । जीवन विज्ञानको नवीन दर्शनको रुपमा प्रशंसात्मक खो जको उदय भएको हो  । डे भिड कुपरराइडर यो दर्शनका प्रणे ता हुन् । ने पालमा सन् २००२ दे खि यो दर्शनलाई संस् थागत रुपमा बुझ्न, बुझाउन, उपयो ग गर्न र समाज रुपान्तरणमा यो गदान पु¥याउन सक्दो प्रयास भइरहे को छ । इम्याजीन ने पाल नामक स् वयंसे वी संस्थाले संयो जनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहे को छ ।
यस संस्थाले सन् २००९ मा प्रशंंसात्मक खो ज सम्बन्धी विश्व सम्मे लन ने पालमा आयो जना गरे र ने पालको परिचय विश्वव्यापी बनाउन र विश्वस् तरीय ज्ञानलाई ने पालमा फै लाएर सामाजिक रुपान्तरणमा सघाउन महत्वपूर्ण जिम्मे वारी सम्पादन गरे को हो  । सन् २०१४ मा पो खरामा प्रशंसात्मक खो ज सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मे लन आयो जना गरे र इम्याजीन ने पालले यस नवीन दर्शनको महत्व र उपादे यतालाई स् थानीयकरण गनेर् कार्यको शुरुवात गरे को हो  । अब प्रदे शस्तरमा सम्मे लन आयो जना गरे र सकारात्मक ज्ञानको प्रवाहद्वारा समाज रुपान्तरणमा यो गदान पु¥याउने इम्याजीन ने पालको लक्ष रहे को छ ।
आध्यात्मिक र आधुनिक विधा, विधि र विज्ञानको सम्मिश्रण अनुभूत हुने प्रशंसात्मक खो जले यथार्थमा व्यक्तिको भित्री सो च, बाहिरी व्यवहार, अतितबाट सिकाइ र आगतमा तीनको उपयो गलाई सिलसिला मिलाई सदुपयो ग गर्न सर्वप्रथम व्यक्ति नै मनसा–वाचा–कर्मणा तयार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छ । यसरी व्यक्ति पूर्णरुपमा तयार हुनलाई संभावनाका अनन्त किरणहरु व्यक्तिभित्रै हुन्छन् भन्ने कुराको स् वयंले नै बो ध गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने सार सन्दे श प्रशंसात्मक खो जको दर्शनले प्रवाह गर्दछ । तर त्यस् तो बो ध गर्न नसक्दा व्यक्ति अ“ध्यारो मा अलमली रहे को वा जीवनयात्राले सही मार्ग पकड्न नसके को प्रतीत हुन्छ । यो अवस् थामा अ“ध्यारो लाई पन्छाएर उज्यालो जीवन मार्ग पछ्याउन व्यक्तिभित्रको अनन्त सम्भावना खो जी गदैर् तीनको सार्थक उपयो गमा लाग्न व्यक्तिलाई तयार पानेर् अमो ध अस् त्रको रुपमा प्रशंसात्मक खो जको दर्शनलाई परिभाषित गनेर् गरिन्छ । प्रशंसात्मक खो जको दर्शनले ‘डिस् कभरी’ लाई प्रस् थान बिन्दु माने को छ । व्यक्ति जब आफू भित्रका तमाम संभावनाहरुलाई नियाल्न, निफल्न र निचो ड निकाल्न समर्थ हुन्छ त्यही नै डिस् कभरी हो  । डिस् कभरीको जगमा उभिएर व्यक्तिले जीवनका आगामी पथ, पाइला र परिदृष्यलाई परिकल्पना गर्न अर्थात सपना दे ख्न शुरु गर्दछ । सो अवस् थालाई ‘ड्रिम’ को चरण भनिन्छ । यो चरण प्रशंसात्मक खो जको दो स्रो माइलस् टो न हो  । ‘ड्रिम’लाई साकार पार्न आवश्यक पनेर् अनुशासन र समर्पणका साथ यो जनाको खाका तर्जुमा वा मुख्य क्रियाकलापको छनो ट, स्रो त साधनको विनियो जन, समय तालिका निर्धारण, कार्यान्वयनको तयारी आदिको बन्दो बस्त गनेर् काम गरिन्छ जसलाई ‘डिजाइन’ नामाकरण गरिएको छ । यो प्रशंसात्मक खो जको ते स्रो माइल स् टो न हो  । यसरी ‘डिजाइन’ गरिएको यो जनालाई कार्यान्वयन गरे र नतिजा हासिल गदैर् आकांक्षा फलीभूत पार्नु नै ‘डे स् िटनी’ हो भने र प्रशंसात्मक दर्शनको सारतत्वलाई चारवटा ‘डि’ बाट बुझाउने गरी सूत्र निर्धारण गरिएको छ । उक्त सूत्रको निरन्तर अवलम्बनबाट व्यक्तिमा अन्तरनिहीत अनन्त सम्भावनाको उजागर भएर तीनको सदुपयो गबाट समृद्धि हासिल हु“दै जान्छ भन्ने गहिरो विश्वास यस दर्शनका अभ्यासकर्ताहरुमा रहे को छ ।
कुनै पनि दर्शन समाजसापे क्ष भएमा मात्र उपयो गी ठहर्छ । ने पाली समाजको चरित्रस“ग दा“जे र प्रशंसात्मक खो जको उपयो गिताको कसी लगाउ“दा ने पाली समाजका लागि यो दर्शन अमृतबुटी हुन सक्ने दे खिन्छ । यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्न समाजको चरित्र विश्ले षण हुन जरुरी हुन्छ । ने पाली समाजको चरित्रका राम्रा विशे षताहरु के लाउ“दा यो समावे शी छ र सहिष्णुतामा आधारित छ । सहयो ग र शिष्टाचार ने पाली समाजलाई जीवन्त बनाउने आधार रहे का छन् । समाजभित्र सनातनी संस् कार र रितिथितिमा विविधता छ । तथापि तीनमा प्रकट हुने समभावले समाजलाई एकतामा बा“धिराखे को छ । यस् ता विशिष्ट विशे षता भएको ने पाली समाजका के ही पक्ष भने अप्रिय छन् । ने पालीहरु मुलुक बाहिर परिश्रमी भने र नाम कमाएका छन् तर स् वदे शमा मे हनती हुन सके का छै नन् । त्यसै ले ने पाली समाजलाई अल्छी समाजको आरो प छ । ने पालीहरुको व्यवसायिकउन्मुखता भन्दा निर्वाहमुखी जीवनमा रमाउने स् वभाव छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति उकालो लाग्न सकिरहे को छै न । ने पाली समाजमा घर परिवारको काममा परम्परागत कार्य विभाजन लागु छ । यसबाट महिलाको कार्यबो झको मात्रा अत्यधिक छ । पुरुषप्रधान समाजको चरित्रले महिलाहरुलाई अधिकार र अवसरमा पछि पारे को अवस् था छ । साथसाथै ने पाली समाज उमे र प्रधान शासकीय सो चबाट ग्रसित छ ।
त्यसै ले अग्रज वा ज्ये ष्ठहरुको हालीमुहाली कायम छ । ने पाली समाजले ‘कामको प्रशंसा सामुन्ने मा नगनेर् ’ संस् कार सिकाएको छ । यो संस् कारले प्रशंसाबाट पै दा हुने व्यक्तिको उत्साह–उर्जा–उत्सुकतालाई उम्रन र गजाउन दिएको छै न । हरे क विषयलाई समस् याको समाधान पहिल्याउने को णबाट व्यवस् थापन गर्न सिकाइन्छ । यसले सम्भावनालाई नियाल्न र गन्तव्य अथवा ‘डे स् िटनी’ मा उपयो ग गर्न खुम्चाएको छ । शिक्षा प्रणाली सिद्धान्त सिकाउने मा बढी के न्द्रित भएकाले व्यवहारिक ज्ञान–सीप भएकाहरुको उपलब्धता न्यून छ । यसरी गुज्रिरहे को ने पाली समाजमा व्यक्तिको सो च सकारात्मकरुपमा फक्रन र बौ द्धिक सिर्जनशीलता फस् टाउनका लागि प्रशंसात्मक खो जको विधि र तरीकाको अवलम्बन अपरिहार्य छ ।
विश्व समाज सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा अग्रसर भइरहे को अवस् थामा ने पाली समाज पनि सो ही सापे क्ष हुन जरुरी छ । यस निमित्त बौ द्धिक सिर्जनशीलता अपरिहार्य छ । यसका लागि व्यक्तिको सो च र चिन्तन सकारात्मक, प्रशंसात्मक र अनुकरणात्मक हुनुपर्दछ । प्रशंसात्मक खो जले व्यक्तिलाई तिखार्छ, निखार्छ र व्यक्ति स् वयंले स् वीकार्छ कि समाजको निर्माता म हु“ र मबाटै सामाजिक रुपान्तरणको प्रयास प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । अर्थात व्यक्तिले समाज निर्माणको ने तृत्व गनेर् परिस् िथति बन्छ । व्यक्तिले अगुवाई गरे र बने को समाज रुपान्तरणमुखी हुन्छ भन्ने भनाइ छ । तर अहिले समाजले व्यक्तिको चरित्र बनाएको अवस् था छ । यस् तो अवस् थामा भ्रष्टाचार मौ लाउ“छ भन्ने जानकारहरुको भनाइ छ । तसर्थ व्यक्तिको असल चरित्रले समाजको विशे षता विकास गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी कुरा गरिरह“दा ने पाली समाजमा सामाजिक रुपान्तरणका अभियन्ता नभएकै हुन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हो , ने पालमा सामाजिक रुपान्तरण अभियन्ता थिए र छन् । नत्र शिक्षामा षडानन्द अधिकारी दिङ्लाबाट कसरी चिनिन्थे , परो पकारमा दयावीर कंसाकार कसरी गनिन्थे र आविष्कारमा महावीर पुन किन खटिरहन्थे ? चिकित्सा से वामा भगवान को इरालाको नाम किन लिइन्थ्यो ? महिला तथा बालबालिका उद्धारमा अनुराधा को इराला, पुष्पा बस् ने तको नाम किन लिनुपथ्योर् ? धुर्मुस सुन्तली किन प्रचारित हुन्थे ? विद्युत वितरणमा कुलमान घिसिङको चर्चा किन चुलिन्थ्यो ? ने पाल वायुसे वालाई उकास् न सुगत कंशाकारको नाम किन सुनिन्थ्यो ? तथापि विश्व समाज ज्ञान र प्रविधिको संयो जन गरे र सुखी र सम्पन्न हु“दै समृद्धिको यात्रामा लम्किरहे को अवस् थामा ने पालको है सियत आशा लाग्दो रुपमा अघि बढ्न नसके को कारणले अन्तरकुन्तर एकाध पिलपिल गरे को दे खिने बत्तीरुपी के ही व्यक्तिको चर्चा गरे र मात्र मुलुकले समृद्धिको सपना साकार पार्न सम्भव छै न । दे शका छे उकुनासम्म असल नागरिकको संख्यालाई बढाएर लाख बत्तीको रुपमा ज्यो तिर्मय बनाउ“दै व्यक्तिको सिर्जनशीलताको विकासबाट समाजको चरित्रलाई उद्यमशीलता, क्रियाशीलता र गतिशीलतायुक्त बनाउन जरुरी छ । यस निमित्त प्रशंसात्मक खो जको तरीका, विधि र उपायहरुको निरन्तर अभ्यासबाट व्यक्तिलाई सचे त, सिपालु र व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ र त्यसै बाट सम्भावनाको ढो का खुल्छ र समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ भन्ने विश्वासबाट प्रशंसात्मक खो जको चर्चा गरिएको हो  ।
ने पाली समाजमा दयनीयता दर्शाएर दयाको याचना गनेर् चलन छ । व्यक्तिको जीवनका तमाम सम्पन्नतालाई रित्तो दे खे र विरक्तिएको घटना पटक– पटक सुनिन्छ । तर जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण सामथ्र्य भने को समय हो  । हरे क व्यक्ति समयले गर्दा बालक, किशो र, युवा र बृद्ध भएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति बालकबाट एकै पटक बृद्ध हुन सक्दै न । किशो र र युवा ह“ुदै बृद्ध बन्छ । किशो र र युवा अवस् था त्यसै पनि फक्रिने , फुल्ने र फल्ने समय हो  । अझ भन्ने हो भने यो समय हरे क व्यक्तिको सुन्दरता, शक्ति र श्रमको बे जो ड सामथ्र्य वे ष्ठित हुने अवस् था हो  । सो उर्वर समयमा पनि व्यक्ति ओ इलाएर कुण्ठित भएको भे टिन्छ । वास् तवमा यही समयमा व्यक्ति नकारात्मक सो च वा चिन्ताबाट जो गिनुपर्दछ र सकारात्मक सो च वा चिन्तनमा लाग्नु पर्दछ । यसका लागि पनि प्रशांसात्मक खो जको चर्चा भइरहन जरुरी छ ।
व्यक्तिलाई ‘डिप्रे सन’ वा ‘एग्रे सन’ को खतराबाट जो गाएर ‘से लिब्रे सन’ को मार्गमण हिडाउन पनि व्यक्ति स् वयं सकारात्मक मनो विज्ञानबाट निदेर् शित बन्नुपर्दछ । हरे क विषयमा सम्भावना हुन्छन् र समस् या पनि हुन्छन् । सम्भावनालाई दे ख्न सक्दा समस्या गौ ण भएर जान्छन् । सम्भावनाबाटै समृद्धिको मार्गप्रशस् त हुने हो  । सम्भावना नदे खे र समस् या मात्र दे ख्न थाल्ने हो भने व्यक्तिमा निराशा बढ्न थाल्छ । हरे क व्यक्तिका जीवनका अतितलाई नियाल्दा धे रै पटक खुशीका क्षणहरु आएका हुन्छन् । तीनै को स्मरण गदैर् खुशीको प्राप्तिमा लाग्ने हो भने चिन्तन सकारात्मक बन्दै जान्छ । तर पनि अधिकांश व्यक्ति जीवनसग है रान भएका घटनाको मात्र स् मरण गरे र बाचे को दे खिन्छ । जहा“ छ जे छ जे गरिरहे को छ त्यसै बाट जीवन जीउनुपर्ने हुन्छ । त्यो यथार्थता हो  । त्यसै मा सम्भावना पहिल्याउन सक्नु नै जीवनको सार्थकता हो  । आफ्नो है रानीको अन्त न ईश्वर पुकारे र हुन्छ न त राज्य सरापे र हुन्छ । त्यसै ले व्यक्ति स् वयं सकारात्मक बन्नुपर्दछ र प्रशंसात्मक खो जले सकारात्मक बन्न सिकाउछ ।
ने पालको संविधानमा अन्तरनिहीत आकांक्षाका सपना साकार पार्न र संविधानले निर्धारण गरे का नागरिक कर्तव्य पूरा गर्न पनि सकारात्मक दृष्टिको ण अथवा प्रशंसायुक्त व्यवहार आवश्यक छ । मुलुकबासीलाई आशा, भरो शा, से वा, सुविधा, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूतिद्वारा समृद्धशाली भविष्य तर्फ डो ¥याउन ने पालको संविधानले ने पाली जनतालाई भरपुर सपना बा“डे को छ । संविधानको कार्यान्वयनले उक्त समृद्धिको सपना साकार पार्न संभव छ । यसका लागि मुलुकले एक्सन लिडर खो जिरहे को छ । संघीय ढा“चाका तीनवटै तहका निर्वाचित सरकारका प्रमुखहरुसमक्ष आफूलाई एक्सन लिडर प्रमाणित गर्न अहिले स्वर्णिम अवसर उपलब्ध छ । यही समसामयिक सान्दर्भिकतालाई मध्यनजर गरे र इम्याजीन ने पालले यही सन् २०१८ को डिसे म्बर ४ दे खि ६ सम्म भै रहवामा प्रदे शस्तरीय प्रशंसात्मक खो ज सम्बन्धी सम्मे लनको आयो जना गनेर् निर्णय गरे को छ । सम्मे लनमा प्रशंसात्मक खो जका सै द्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षमा अमे रिकी प्रो पे mसरको विशे ष प्रवचन रहने छ । साथै अति महत्वपूर्ण उपयो गी शीर्षकहरुमा नाम चले का विद्वान अनुभवी विषय विज्ञहरुबाट प्रस् तुति रहने छ । विकासका महत्वपूर्ण आयाममा बहस गरिने छ । सारांशमा सम्मे लन ज्ञान आर्जन एवं स् वयं रुपान्तरणका दृष्टिले सहभागीहरुका लागि अति विशिष्ट मौ का हुने छ । उक्त सम्मे लनमा प्रदे शका सरकारी, गैरसरकारी, निजी, शै क्षिक, वित्तीय, सामुदायिक र स् वतन्त्र तवरबाट उल्ले ख्य सहभागिता हुने अपे क्षा आयो जकले राखे को छ । समृद्ध प्रदे श, खुशी जनताको दीर्घकालीन सो चका साथ पा“च नम्बर प्रदे श अघि बढिरहे को अवस् थामा पङ्तिकार स् वयं यसै प्रदे शको वासिन्दा भएको र इम्याजीन ने पालको वर्तमान अध्यक्षसमे त भएकाले प्रदे शस् तरीय सम्मे लनका लागि सर्वप्रथम पाच नम्बर प्रदे श छनो टमा परे को हो  ।
अन्य प्रदे शमा पनि क्रमशः प्रदे शस् तरीय सम्मे लनको आयो जना गरिने छ । सम्मे लन सम्बन्धी अग्रिम जानकारीले सबै मा उत्सुकता पै दा गनेर् र सम्मे लनमा सहभागी हुने रहर जगाउने भएकाले सो ही उद्दे श्यहे तु यो ले ख सबै को नजरमा परो स् र सम्मे लनमा सहभागी हुने रहर जागो स् भन्ने अपे क्षाका साथ यो ले खको बिट मार्दछु ।
Previous: व्यवसायीले बजार अनुगमन नपर्ख
Next: दुर्घटनाप्रति गम्भीर बनौं